Puntland oo ka digtay in madax banaanida Soomaaliya ay khatar gasho hal sabab darteed – Hornafrik Media Network
Khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa sii xoogeysanaya, waxaana soo baxday digniin ay Puntland hordhigtay madaxda dowladda federaalka.
Wasiirka Wasaradda Warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed ayaa ka dhawaajiyay in dowlada ay bilahii ugu dambeysay sare u qaaday faragalinta iyo caburinta dhanka maamulka ah oo ay ku heyso nidaamka ay ku shaqeeyaan, wuxuuna u sheegay in ay horseedi karto dhibaato hor leh.
Wasiirka wuxuu carabka ku adkeeyay in Puntland ay dhawr jeer isku dayday in ay wada-hadal la gasho madaxda dowladda federaalka si loo dhameeyo mugdiga ku dhex jira, balse ay dowladda ku fashilantay fulinta dalabkaas.
“Dhibaato ayaa ku imaan karta dalka hadii aan la tixgelin dastuurka, madaxda dowladda waxaan usoo jeedinayaa madaxda federaalka in ay maamulka Puntland ka dhaafaan faragalinta” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland.
Hadalkan ayaa imaanaya xilli wareysi TV-ga Universal uu siiyey Madaxweyne Farmaajo uu ku sheegay in dhawr jeer uu madaxweynaha Puntland Saciid Deni ka dalbaday in ay wada-hadlaan Muqdishana uu ku casuumay, balse uu ka dhega adeygay, sida uu hadalka u dhigay.